Home Wararka (Daawo) Warbaahinta Ingiriiska oo shaacisay magaca ninkii dilay MP. David Amess
(Daawo) Warbaahinta Ingiriiska oo shaacisay magaca ninkii dilay MP. David Amess
War aay goordhow shaacisay warbaahinta Skye News ayaa lagu sheegay magaca shaqsigii Tooreyda ku dilay Xildhibaan ka tirsan Baarlabaanka Ingiriiska oo lagu magacaabo Sir David Amess oo shalay u dhintay dhaawaca ka soo gaaray toorey.
Magaca wiilka geystay dilka Xildhibaanka ayaa lagu sheegay Cali Xarbi Cali oo 25 jir ah dhalashadiisana tahay Ingiriis balse ka soo jeeda Soomaali.
Booliska ka hortagga argagixisada ayaa Weli ku jira baaritaan, waxaase Booliska ay sheegeen in aanay jirin qof kale oo lagu tuhunsan yahay dilka Xildhibaanka.